သငျသညျအတူတူအခြားကွာရှင်းမှုကိစ္စဖြစ်လာမခံပါနဲ့ - Ma Rong နှင့်ဝမ် Baoqiang | Hou ယန်တန်အရာရှိတဦးက
သငျသညျအတူတူအခြားကွာရှင်းမှုကိစ္စဖြစ်လာမခံပါနဲ့ - Ma Rong နှင့်ဝမ် Baoqiang
Baoqiang ကွာရှင်းဖို့အစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့သည်，မိတ်ဆွေတစ်ခုလုံးကိုစက်ဝိုင်းမှသတင်းစကားတစ်ခုတင်ရန်ဗုံးကြဲခဲ့သည်，လူတိုင်းခံရသော်လည်းကလေး ah，ထိုအခါအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသော scripts ကိုကိုယ်လက်မိတ်ဆွေစက်ဝိုင်းကလေးများအတွက်ကိုယ်ချင်းစာပါကြောင်း
"Baoqiang အဖြစ်အပျက်အောင်မြင်စွာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အိုလံပစ်ဖမ်းပြီး，သီချင်း Zhe ရလိုင်စင်ဒဏ်ငွေ，ma Rong ရKinky အမှတ်တံဆိပ်，Baoqiang ရနာကျင်မှုကတ်များ。"
"မာရင်းကျို Rong ခိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ，Shou အထီးကျန်ရရှိနိုင်。 ကလေးလေးမျိုး，ကိုကူညီဖို့အဟောငျးသီချင်း。 ဆန့်ကျင်သည်ဖါရောဘုရင်အတွက်လူတိုင်းဟာ，အဟောငျးသီချင်းအမှတ်တရလှည့်ခဲ့သည်!!!!"
ma Rong နှင့်ဝမ် Baoqiang ကွာရှင်းမှုကိစ္စ，ဘေဂျင်း Chaoyang တရားရုံးတှငျကငျြးပခဲ့ Pretrial ရှင်းလင်းပွဲ。Baoqiang ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတရားရုံးထဲမှာပေါ်လာပါ，သို့သော်မာရင်းကျို Rongshen ပေါ်လာကြပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး，ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်，မီဒီယာအဆက်အသွယ် Baoqiang ရှေ့နေ Zhang က Qi Huai，အခြားဘက်ခြမ်းအမှု၏တိုးတက်မှုအပေါ်မည်သည့်တုန့်ပြန်စေပါဘူး。
18ညနေ，ငါမိုက်ခရို Bo-Baoqiang ကပြောပါတယ်：သင်၌ရှိ，ငါကအရမ်းခိုင်ခံ့ကြပြီ，မျှတသောတရားရုံးအမှုကိုင်တွယ်မလဲ! နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းကိုမှမျှော်လင့်。
ကလေးကိုမီဒီယာ access ကိုပြောပါတယ်ရှေ့၌ငါသတိရ，သူကအမျိုးသမီးနှစ်ဦး၏သင်၏အသက်တာရဲ့အရေးအပါဆုံး，တစ်ဦးကမိခင်，တစ်ဦးကသမီး。ကမာရင်းကျို Rong?
ဒါပေမယ့်လည်းသဘင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကလေးအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်များသောကြောင့်,，မကြာခဏဆိုသလိုအတူတူအများအပြားမှဇနီးနှင့်အတူ，Long ကပြဿနာသဘာဝကျကျလာ。သူ့ဇနီးအလုပ်များ snub ခဲ့သောကွောငျ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်，ma Rong သဘာဝကျကျခိုင်ခိုင်လုံလုံကိစ္စပေး၏。
သင်တို့သည်လည်းမြတ်နိုးနိုင်，တကယ်တော့လူတွေဟာရိုးရှင်းတဲ့၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အလွန်စိုးရိမ်နေကြ >>>
မည်သို့ပင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်၏，ma Rong ဝမ် Baoqiang နှစ်ယောက်ပြီးသားကွဲပြားခြားနားသောဒဏ်ရာများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ရပြီ，ထိုအမှုအရာနောက်ကျောလှည့်ကြသည်မဟုတ်。
သင်ကတခြားပါတီရှိမရှိလစျြလြူရှုများမှာယခုအချိန်တွင် ~ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်，နှစ်ခုမကြာခဏအသီးအသီးအခြားအတူလိုက်ပါခဲ့ကြပုံကိုအလုပ်ရှုပ်နေပါစေ，လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကို，အသီးအသီးအခြားဘဝစိတ်ခံစားမှုပြောပြ，action ကိုသငျသညျသှားဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်, သူကပြောပါတယ် - "ဒီတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ，သငျသညျရှိသည်ဖို့ nice"。
သငျသညျစုံတွဲများကွဲကွာဘယ်တော့မှ Xiaobian ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ - တစ်သက်တာအားဖြင့်လိုက်ပါသွား
ဒီ entry အားဖြင့် posted ခဲ့သည် Hou ယန်တန် တွင် ဝေမျှမယ်ဘဝ နှင့် tagged ဝေမျှမယ်ဘဝ.
Hou ယန်တန် - လိုအပ်နေသောူပည်သူမိုဃ်းတိမ်၌စိုက်ပျိုးထိုင်ဝမ်ရဲ့ Alishan တောင်ကြီးတောင်လက်ဖက်ရည်
ဒဏ္ဍာရီသေးငယ်တဲ့အသားအပွင့်လည်းဝတ်ရည်နောက်ဆုံး ~ ယနေ့ပျော်မွေ့ကျေးဇူးပြုပြီးအောင်မြင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတည်ဆောက်，ဟက်တာဟက်တာ wow
အပိုဒ်အုပ်စုများ Category: Select လုပ်ပါပရိုမိုးရှင်းအသိပေးစာအကြံပြုလက်ဖက်ရည်နှင့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများ်ထမ်းခေါ်ယူမှုကို MessageHou ယန်တန်လက်ဖက်ဝေမျှမယ်ဘဝအရည်အသွေးလက်ဖက်ရည်လက်ဖက်ရည်နိဒါန်းလက်ဖက်ရည်အကျိုးသက်ရောက်မှုလက်ဖက်ရည်ပုံပြင်လက်ဖက်ရည်ပေမယ့ဝေမျှမယ်ပျော်စရာလက်ဖက်ရည်ကနျြးမာရေးကုထုံး
eBay YanHouTang အလုပ်အကိုင်များ Lazada အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်း ဝေမျှမယ်ဘဝ ပရိုမိုးရှင်း သဘာဝလက်ဖက်ခြောက် Hou ယန်တန်လက်ဖက် Hou ယန်တန် net ကနီ Amazon dhgate တောင်ကြီးတောင်လက်ဖက်ရည် n95 မျက်နှာဖုံးများ ပရိုမိုးရှင်း Aliexpress ်ထမ်းခေါ်ယူမှု အွန်လိုင်း Mall က WeChat Mall က Jian Beacon အလုပ် ကြှနျုပျတို့ကို Join ဆုတောင်း Hou ယန် Tong Mall က ပေမယ့လှုပ်ရှားမှုများ အလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ခြင်း အကြံပြု FDA က